[RASMI] xidhmo dr.fone - Android Data saaridda: Ladnaansho Xogta laga Android Broken
xidhmo dr.fone - Android Data saaridda (Device Waxyeello)
software xogta wax kaqabashada 1aad Adduunka ee qalabka Android jebiyey.
heerka ugu sarreeya wax kaqabashada in industry ee.
Kabsado sawiro, videos, xiriirada, fariimaha, abuse call, iyo in ka badan.
Jaanqaadaan qalabka Samsung Galaxy.
Waxaan heli karaa qalab aad burburay iyo hesho files dhabarkaaga.
Aan ka jawaabaya
ka jaban Android ee Xaaladaha kala duwan ka soo kabsado Data
xaaladaha kala duwan waxaa taageera, sida qalad ah ay waxyeello shaashadda of qalab Android aad, screen uu noqdo madow iyo muujinaysaa waxba on, aan ka heli kartaa nidaamka sababo aan la garanayn, awoodin in la furo Debug USB ah, illoobin password screen qufulka, ma jawaab la screen xiriiri iyo in ka badan.
Iskaan iyo Kulanka Xiisaha for Free
Waxaad isticmaali kartaa version maxkamad free of this software kabashada xogta Android jabay in laga baarayo iyo xogta Xiisaha on qalab aad, si aad go'aan ka gaari kara oo item inuu ka soo kabsado.
Kabsado Card SD on Android
Ma aha oo kaliya kaadhka xusuusta gudaha, taas jebiyey xogta Android software kabashada kaloo ka caawisaa in laga baarayo iyo soo kabsadaan xogta laga card SD aad on qalab jabay.
Files Recoverable ka qalab Android jebisay
Waxaad dhoofin karo dadka aad la xiriirto in CSV, HTML iyo VCF qaabab in computer, si sahlan ay u isticmaalaan ka dib. Oo badbaadin farriimo on qalab Android aad jabay qaab HTML in computer akhriska fudud ama daabacaadda. Waayo, photos, video, audio iyo noocyada kale ee waraaqaha, waxaad iyaga ku badbaadin kartaa meel kasta on your computer, iyo inta aad ka heli kartaa si fudud.
Aad shaqee Android Qalabka
Currently, barnaamijka jabay kabashada xogta Android this si fiican u shaqeeya badan oo telefoonada Samsung iyo murriyado, sida taxanaha Galaxy S, Galaxy taxane Note ah, iwm Sida in noocyada kale ee qalabka Android, ha ka welwelin. Waxay u iman doontaa sida ugu dhaqsaha badan ee mustaqbalka dhow.
Tani barnaamijka xogta Android jabtay waxaa si buuxda u akhri-keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Dhignaashada Android Buuxi
Fiiro 3, Ogow 4, Ogow 4 Edge, Ogow 5, Ogow 5 DUOS, Ogow 8, Note II
Guudmar liiska qalabka ay taageerayaan >>
Android 5.0 iyo hore
Ceshano Files From ...
Iskaan qalab aad u soo kabsadaan xogta
Iskaan kaadhka xusuusta si aad u soo kabsadaan xogta
BADBAADI files ka Android aad jebisay.
Guarantee xidhmo dr.fone
Kabsadaan xogta aad laga badiyay nabad ah oo maskaxda ku.
Kabsado wax kasta oo aad rabto qalabka
Dhib ma leh in xogta aad on qalab ah oo dhan
Read-kaliya, xogta ma xajin ama xaday
interface dareen qof kasta si ay u isticmaalaan
Isku day software ah oo lacag la'aan ah muddo 30 maalmood ah
Mirror, muraayad derbiga dul jooga, kuwaas oo ay geesi- ee adduunka ugu fiican?
Haa! Wondershare Dr. Fone waa! noloshayda badbaadi (Sawirro)! Waxaan ku filan aan uga mahadcelin karaa horumarinta barnaamijka u weyn oo kale ah!
Excellent software kabashada Android
Waxaan soo iibsaday si aan ka soo kaban karin wax walba on my Hooyo ee Samsung Galaxy Phone kadib markii format ah.
Waxaan si qalad ah la tirtiro sawirrada ayaan Samsung S3 xalay qaaday oo waxaan ahaa sidaas xumaaday, maxaa yeelay sawirada ahaayeen gabadhayda dharka arooska ugu horeysay \_ 's isku day on. Waxaan ka baryay in this shaqayn lahaa wuxuu sameeyey !! muddo dheer ayay ku qaadatay, laakiin mar kale ayaan waxan u samayn lahaa oo aan kula talin lahaa wax soo saarka this qof !! Waad ku mahadsan tahay mar kale. Waxaan ahay hooyo aad ugu faraxsan aroosadda.
Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada ka Phone Android la Screen Broken
2 Siyaabaha isticmaal Phone Android la Screen Broken
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka jaban Android Qalabka
Sida loo Unlock Android Phone la Screen ah Broken
Sida loo Phone Android kaabta la Screen Broken
Sidee inuu ka soo kabsado Message Text ka jajabay Samsung Devices
Sida loo Hagaaji Phones Bricked Android iyo Kiniinka
Sida loo Hagaaji Screen Samsung Galaxy Black
Kabsadaan xogta la tirtiro ama laga badiyay ka 6000+ qalabka Android.